टी–ट्वान्टी विश्व बरियतामा नेपाल यथावत् - निष्पक्षखबर
टी–ट्वान्टी विश्व बरियतामा नेपाल यथावत्
बुधबार, असोज ०७, २०७७
काठमाडौंः अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)को टी–ट्वान्टी विश्व बरियतामा नेपालको स्थान यथावत् रहेको छ । आइसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियताअनुसार नेपाल टी–ट्वान्टीतर्फ १२ औँ स्थानमा रहेको छ ।
टी–ट्वान्टीमा नेपाल ११ औँ स्थानसम्म पुगेको छ । टी–ट्वान्टीको विश्व बरियतामा पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा, अष्ट्रेलिया दोस्रो, बेलायत तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका पाँचौँ स्थानमा छन् ।
टी–ट्वान्टीको खेलाडी बरियताअन्तर्गत ब्याटिङतर्फ नेपालका पारस खड्का ६२ औँ स्थानमा छन् । यसअघि उनी ६० औं स्थानमा थिए । बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछाने ८५ औँ स्थानमा छन् । यसअघि उनी ८३ औँ स्थानमा थिए । अलराउण्डरतर्फ पारस २७ औँ स्थानमा, सोमपाल कामी ६५औँ स्थानमा तथा करण केसी ७५ औँ स्थानमा रहेका छन् ।
बुढासुब्बा गोल्डकपमा नयाँ प्रविधिः नेपालमै पहिलो पटक भीएआरको प्रयोग गरिने
हक्कीमा प्रदेश ५, वागमती र आर्मी विजयी
काठमाडौंः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत संघसंस्था समन्वय शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका इन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार पदवहाली गरेका छन् ।
कार्कीलाई खेलकुद विकास विभागका प्रमुख डेमबहादुर बस्नेतले आइतबार पदवहाली गराएका हुन् । सो अवसरमा बस्नेतसहित आपूर्ति तथा भण्डार शाखाका प्रमुख सुजन खतिवडा, खेलकुद चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख तिलक नेपाली, खेलकुद विकास विभागका प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र राईलगायतले कार्कीलाई बधाइ दिँदै कार्यकाल सफलताका लागि शुभकामना दिएका थिए ।
राखेपको गत भदौ ३१ गतेको निर्णयानुसार कार्कीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । कार्की यसअघि १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद तयारी सचिवालयमा थिए । कार्कीसँग बझाङ, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौं जिल्ला खेलकुद विकास समिति, कर्मचारी प्रशासन शाखा तथा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी सचिवालयमा प्रमुख भई काम गरेको अनुभव छ ।
दौड र बुद्धिचालमा असामान्य प्रतिभा भएकी जेस्मिना (बाल दिवस विशेष ९)
खेल्न कसलाई मन नपर्ला र ? उमेरअनुसार इच्छाएको खेल खेल्न खाँदै गरेको गाँससमेत छोडेर दौडने समाजबाट हुर्किएका हाँै हामी । पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिभावान विद्यार्थीले प्रतिभा देखाइरहेका छन् । यस्तै एक प्रतिभा हुन् सुन्दरहरैंचा १ मा रहेको जनता माविमा पढ्ने जेस्मिना खवास । उनको प्रतिभा भनेको दौड हो । घरको काम गर्दै पुस्तक बोकेर विद्यालय जाने उनी अरु भन्दा फरक छिन् । कक्षामा सधैँ उपस्थित हुने गरेकी जेस्मिना बुद्धिचाल प्रतियोगितामा पनि अब्बल छिन् ।
विभिन्न प्रतियोगितमा भाग लिएकी उनले २०७४ सालमा भएको २ सय मिटर दौडमा तृतीय स्थान हात पार्न सफल भइन् । त्यसपछि पनि उनी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न लागिरहिन् । २०७६ को राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा उनी भाग लिन पुगिन् । त्यहाँ दोस्रो स्थान हात पार्न सफल भइन् । यसैको दोस्रो संस्करणमा ट्रिपल जम्प प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हात पारिन् । यसैगरी विराट चेस क्लबद्वारा आयोजित बुद्धिचाल प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हात पारिन् ।
सामान्य परिवारमा हुर्किएकी उनी यसरी विजेता बनेर पुरस्कार ल्याउँदा दंग पर्थिन् । ‘मैले पुरस्कार ल्याउँदा घरमा अत्यन्तै राम्रो भन्ने गर्नुहुन्थयो’, उनी भन्छिन्, ‘परिवारबाट पनि पढाइसँगै खेलकुदमा लाग्न प्रेरणा मिलेको थियो ।’ इञ्जिनियर बन्ने इच्छा रहेको बताउने उनी खेललाई पनि सँगसँगै अगाडि लाने बताउँछिन् । उनका बुबा शिक्षण पेशामा आबद्ध छन् । १५ वर्षीया उनी दौडको क्षेत्रमा पनि आफ्नो नाम लेखाउन चाहन्छिन् ।
मेकानिकल इञ्जिनियर बन्ने सपना बोकेका बाल चित्रकार अंकित (बाल दिवस विशेष ८)
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा म्यान अफ द म्याच बनेका सुमन (बाल दिवस विशेष ७)
स्वरुप खतिवडा: शास्त्रीय गीत गाउन मन पराउने सुन्दरहरैंचा आइडल (बाल दिवस विशेष ६)
आफ्नै आवाजमा गजल रेकर्ड गरिसकेका आयुष (बाल दिवस विशेष ५)
उत्कृष्ट चित्रकार बन्ने सपना कोरोनाले खाइदियो (बाल दिवस विशेष ४)
ज्याब्लिङ थ्रोका अब्बल देवान (बाल दिवस विशेष ३)
जादुमयी स्वरका कारण अघि बढ्दै गरेका दियोग (बाल दिवस विशेष २)
मोडलिङ र नृत्यमा आफ्नो भविष्य देखेकी खुस्बु (बाल दिवस विशेष १)
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले क्रिकेटमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन थालेको छ । हालै जिम्बाबेमा भएको विश्वकप छनोटमा सातौँ भएको नेपाल सन् २०२२ सम्म एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश बनेको छ । अहिले समाजमा युवाहरुको क्रिकेटप्रतिको लगाव ह्वात्तै बढेको छ । विद्यालयमा हुने खेलकुदमा पनि यो खेललाई प्राथमिकताका साथ खेलाउने गरिएको छ । सुन्दरहरैंचाका क्रिकेटर सुमन सुन्दासले सानै उमेरमा अन्तराष्ट्रिय खेलमा भाग लिई नगरको नामलाई उचाइमा पुर्याउन सफल भएका छन् । इन्द्रपुर नमुना इङ्लिस स्कुलमा पढ्दै गरेका उनको क्रिकेटप्रतिको मोह यसरी शुरु भएको रहेछ । ‘हाम्रो घर छेउमा प्रमेन्द्र केसी दादाहरु खेल्नुहुन्थ्यो । अनि म उहाँहरुले खेलेको हेर्थेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘त्यो मेरो हेराइ अरुभन्दा फरक रहेछ । अनि दादाले मलाई उहाँको साथी जस्तै खेल्न बोलाउनुहुन्थ्यो । मैले खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने सिक्दै गएँ । दादाहरुको कतै प्रतियोगिता हुँदा सँगै हेर्न जान्थेँ ।
पछिपछि उमेर सानो भए पनि प्रमेन्द्र दादाले मेरो खेल राम्रो मान्नुभएको रहेछ । त्यसपछि जहिल्यै प्राक्टिस गर्न थाल्यौँ । तर घरबाट भने पढाइ बिग्रन्छ भनेर खेल्न जान नदिनेसम्म गर्नुभयो । अनि दादा मेरो घरमा आएर ममी बाबालाई खेलमा भविष्य राम्रो छ, देशमा राम्रो नाम लेखाउन सक्छन् भन्दै सम्झाउनबुझाउन थाल्नुभयो । बिस्तारैबिस्तारै घरबाट पनि सपोर्ट गर्न थाल्नुभयो अहिले त धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ ।’ कहिले ब्याट, कहिले बलसँगै उनको खेल अगाडि बढिरहयो ।
कक्षा ८ मा पढ्दा उनी काठ्माडौंको नेक्सस एकेडेमीमा आबद्ध भए । नेक्सस एकेडेमीमा ९ महिना तालीम गरेपछि उनी क्रिकेट खेल्नकै लागि १६ वर्ष मुनिको टोलीबाट श्रीलंका गए । त्यहाँ ५ वटा म्याच खेलेकोमा उनको टोलीले ४ वटा म्याच जित्यो । उनी उक्त खेलमा म्यान अफ द म्याच बने । यस्तै उनी नेपालमा अन्डर १६ सान कपमा दोस्रो भए । नेक्सस एकेडेमीको उत्कृष्ट विकेट टेकर बने । त्यस्तै प्रदेश क्वाटर फाइनलमा म्यान अफ द म्याच बने ।
सुमन अहिले क्रिकेटमा आफ्नो भविश्य सम्झेर दिनरात लागि परेका छन् । यस क्षेत्रमा क्रिकेट खेल्ने ठाउँ भने कतै नभएर आफ्नो सपना पानीको फोकाजस्तै बिलाउने त होइन भनी उनी चिन्तित छन् । कुनै लक्ष्यमा पुग्न त्यस प्रतिको लगाव, मिहिनेतसँगै ठाउँको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ‘हामीले खेल्ने भनेको घर छेउको बाटो हो । त्यहाँ जतिबेलै गाडी र मान्छे हिँड्ने भएकाले कहिल्यै राम्रो खेल्न पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो वरपर कुनै खेल्ने ठाउँ छैन । यदि भइदिए म र मेरो ठाउँलाई चिनाउन थप सहयोग पुग्ने थियो । मेरो लक्ष्य भनेको पनि राम्रो क्रिकेटर बन्नु नै हो । मलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन सबैभन्दा ठूलो देन दादाको रहेको छ ।’
अर्थ10 months ago
खेलकुद10 months ago
अर्थ4 months ago
मुख्य10 months ago
प्रदेश नं. १7 months ago
मुख्य9 months ago